चार्टर उडानमा पनि छानबिन शुरु, योगेश भट्टराईलाई पनि जेल हाल्छु: मन्त्रि आले – Points Nepal
चार्टर उडानमा पनि छानबिन शुरु, योगेश भट्टराईलाई पनि जेल हाल्छु: मन्त्रि आले
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १४, २०७८ समय: १२:०५:५३
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु चार्टर उडानमा तोकिएकोभन्दा बढी भाडा तिर्न बाध्य भई मर्का परेका व्यक्तिले आधिकारिक कागजातसहित सात दिनभित्र छानबिन समितिलाई इमेलमार्फत निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रभावशाली नेता तथा सांसद मेटमणि चौधरीले अबदेखि एमाले र विजयीको बीचमा कहिल्यै भेट नहुने दाबी गरेका छन् ।
चौधरीले एमालेले जितेको कुरा कुनैपनि पत्रकारले लेख्ने अवसर नै नपाउने पनि ठोकुवा गरेका छन् । उनले एमालेले २०७४ सालमा जितेको कुरा अब कथा बन्ने र भावी सन्ततिहरुलाई सपनाजस्तै लाग्नेपनि उल्लेख गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यस्तो लेखेका छन् । हेरौं उनको स्टाटस:
प्रतिगामि गठबन्धन( नेकपा एमाले, जसपा (महन्त ठाकुर) र राप्रपा बिचको गठबन्धनको शर्मनाक हार भएको छ । हारको लाज छोप्न केपिका चाकरहरू क्क्ष्लनभि नेकपा एमालेलाई ५ दलिय गठबन्धनको हुइँया मच्चाइरहेका छन् ।
याद होस दासर दासिहरूलाई- चुनावि मोर्चामा उभिइसकेपछि मुख्य कुरा जित्नु हो । चाहे एकलै होस या मिलिजुलि । मिलेरै र मिलाएरै जित्ने हो ।
एकलकाँटे तिमिहरू बरू सोँच-हामी किन कसैसँग मिल्न सकेको छैनौ ? हामी दैनिक जस्तो किन एकलिरहेका छौ । सरकारको नेतृत्वबाट प्रतिपक्षिको भुमिकामा कसरी झर्न पुगिम ! के यो बिषयमा कहिले सिहलोकन गरेका छौ रु तिम्रा यिनै घमण्डको कारण आज बिचारा भएका छौ ।
दासहरूले के पनि भुल्नु हुँदैन भने- २०७४ सालको चुनावमा माओबादिसँग चुनावि एकता गरेको कुरा, झापामा राप्रपालाई उम्मेदवारिमा सघाएको र त्यसबाफत मत पाएको, धनुषामा राजेन्द्र महतोलाई मत बेचि अरू ठाँउबाट असुलि गरेको, नवलपरासि, रूपन्देहि र कपिलबस्तुमा गैर एमालेका नेताहरूलाई सुर्य चिन्ह दिएर अरू निर्वाचन
क्षेत्रमा स्वतन्त्रहरूका मत प्राप्ति गरेका ! उक्त सबै कार्य तिमिले बा भनेका खड्गा प्रसाद ओलिले गरेका होइन्न रु दास बन्नुर हुनुको पनि सिमा हुन्छ !
जसले सबैभन्दा बढि दलहरूसँग सहमति र अबैध संझौता गरेका छन् ! तिनैका सन्तानहरू गठबन्धनका बिरूद्दमा बिष बमन गर्नु कत्ति पनि सुहाएन क्या !
फेरि अबुझ र अल्पज्ञानिहरूलाई थाहा हुनु पर्ने हो- सँसारभरिका राजनैतिक अगतिगचभ धुर्बिकरण भइरहेको कुरा । भारतलगायत युरोपमा समेत मिल्न सक्नेहरूका बिचमा चुनावि एकता भएको कुरा । यसैले स्यालहरू- स्यालहुँइया नगरेकै राम्रो ।
राष्ट्रिय सभाको चुनावि परिणाम पछि- दासहरूले २ वटा बिषयलाई महत्त्वका साथ भुकिरहेका छन् -!। यो हार हाम्रो लागि अन्तिम हो र अबको सबै निर्वाचनमा बिजयि हुन्छौ ।
२. ५ दल मिलेर जित्ने- यत्रो फूर्ति ! अल्पज्ञानिहरूलाई के थाहा ! यो हार भर्खर शुरू भएको छ र यो हारको श्रंखला निरन्तर अघि बढ्ने छ । अब देखि नेकपा एमाले र बिजयिको बिचमा कहिल्यै भेट हुने वाला छैन ।
नेकपा एमालेले जितेको कुरा कुनै पनि पत्रकारले लेख्ने अवसर पाँउनैछैन्न । २०७४ सालमा जितेको कुरा कथा बन्नेछ र भाबि सन्ततिहरूलाई सपना जस्तै लाग्नेछ !
Last Updated on: January 28th, 2022 at 12:06 pm